इजरायलमा कार्यरत झापा निवासी लुइँटेलको अस्पतालमा निधन » बुद्ध भूमि नेपाल
वैदेशिक रोजगारको क्रममा इजरायलमा कार्यरत नेपाल स्थित झापा निवासी साबित्रा घिमिरे लुइटेलको अकास्मत निधन भएको छ । अकस्मात बिरामी परेर अस्पतालमा भर्ना भएकी लुइँटेलको निधन भएको इजरायलमा रहेका उनका नजिकका साथीहरुले बताएका छन् ।
केहिदिन अघि अचानक बिरामी भै अस्पतालमा भर्ना भैसकेपछि धेरैले उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्राथना गरेका थिए । निधनको कारण ब्रेन ह्याम्पार भन्ने जानकारीमा आएको छ । जुम भर्चुअल माध्यमबाट मार्फत १७ फ्रेव्रुअरी २०२१ बुधवारका दिन भएकाे झापाली समाज इजरायलको चौथो अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकी थिइन् ।
लामो समयसम्म इजरायलमा रहेकी उनि अन्य विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेकी थिईन । उनि एक समाजसेवीका साथै राम्रो साहित्यकार पनि हुन् । साथीहरुका अनुसार उनि केहि समय पछि सधैका लागि नेपाल फर्कने तयारीमा रहेकी थिईन तर उनको अचानक निधन भएपछि अहिले इजरायलमा रहेका नेपाली र आफन्त सोकमा डुबेका छन् ।
उनको निधन पछि झापाली समाजले बिज्ञप्ति निकाल्दै दुख प्रकट गरेको छ । बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तै :
भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली !! झापाली समाज इजरायलकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष अतिनै मिलनसार सबैको मन मुटुमा अटाउन सक्ने, सहयात्री “सावित्रा लुइँटेल घिमिरे” ज्यू काे आज भएको असमहिक निधनले हामी एकदमै अनि स्तब्ध भएका छौं । यस दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवारजनमा धर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस भनी प्रार्थना गर्दै, दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछौ । 🙏🌼🙏🌼🙏 झापाली समाज परिवार, इजरायल
साथै उनको निधन पछि इजरायलमा रहेका साथीहरुले फेसबुकमा दु:ख र सोकमा डुबेको भन्दै सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्परण गरेका छन् । उनको निधन पछि इजरायलमै कार्यरत दिपिका भुसाल लेख्छिन, जन्म – मृत्यु, यो संसारिक नियम हो ! हामी सबैले एकदिन मृत्युलाई अगाल्दै यो भ्रमको संसार छोड्नै पर्छ तर पनि … साना बच्चा उनीहरुको भबिस्य साथै आफ्ना सपना सुनौलो जिन्दगीको परिकल्पना परिवारको खुशी खोज्दै जन्म देश बाट यो मरुभूमिमा राप र तापले कहाँ पोल्यो के गुम्यो कहाँ गुम्यो खोज्ने हो भने कहिले भेटिदैन ,परदेशिका कथा अनि गाथाहरु !! भगवान यस्तो मृत्युकसैले बरण गर्न नपरोस् !
जुन उदेश्यले परदेश पसेको थियौ दिदी ,ती सबै पूरा गरि घर फर्कने दिन गन्दै बस्दा नि तपाईको लागि यात्रा सहज भएन । आफ्ना चाहाना प्रतिकुल बन्न दैबले दिएन भावपुर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिदी । यस दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवारजनमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस साथै हजुरको दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु ।
त्यस्तै इजरायल बाहिर रहेका राम प्रसाद ढुगेल लेख्छन्, करिबकरिब ६ वर्ष अगाडि सामाजिक संजाल फेसबुकमा भएको हो चिनजान । इजरायलमा वहाँको साहित्यिक झुकाव, सकृयता मैले युएईबाट अनुभव गरेको थिएँ । एउटा बृहत् साहित्यिक ग्रन्थको प्रकाशनमा वहाँले अग्रणि भुमिका निर्वाह गरेको म स्मरण गर्छु । समाचार संकलनको क्रममा वहाँलाई नै मैले श्रोत व्याक्ति पाएको थिएँ ।
त्यो बेलै फेस्बुक म्यासेन्जरमा हाम्रो कुराकानी भएको हो । अत्यन्तै जागरुक, अत्यन्तै मिलनसार, कुशल नेतृत्वकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ, उत्प्रेरित व्याक्तित्वको रुपमा बुझेको थिएँ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका सामाजिक अभियानमा मैले वहाँको सक्रियता देखिथ्यो । साहित्य र समाजसेवामा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि वहाँको अभिरुचि देखिथ्यो ।
इजरायलको नेपाली सामाजिक जीवनमा अति लोकप्रिय, सम्मानित आदरणीय दिदी साबित्रा घिमिरे लुइँटेलको असामयिक निधन भएको खबरले स्तब्ध छु । परिवारजनमा परेको चो टलाई मैले महसुस मात्रै गर्न सक्छु । दिदिको आत्माले वैकुण्ठ बास गरोस् ।
दिदी जस्ता महान विचार भएका वास्तवमै मनकारी मनहरुको निधनले मलाई मृत्युबोध गराउछन् । यो दौडधुप, अस्थिरता, उतारचढाव,मिलन- बिछोड, आपसी प्रेम अनि मोह, तेरो अनि मेरो । सबै सबैलाई अन्ततः छोडेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिले घण्टी बजाउछ ।
जिवनमा कहिले पनि भौतिक रूपमा नभेटेका केही मानिसहरुले पनि यति प्रभाव पार्न सक्छन् भने वहासङग सहकार्य गर्नेहरुले यो निधनमा कति पि’डाबोध गरेका होलान् । शोकसन्तप्त परिवारजन र वहालाई चिन्ने जान्ने सबैलाई धैर्य धारण गर्ने साहस मिलोस । हार्दिक श्रद्धा सुमन